Sida loo abuuro playlist on iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo abuuro playlist ku iPhone
Waxa ay u muuqataa inay aad u sahlan tahay in la abuuro playlist si toos ah iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxan fudud ee loo yaqaan marnaba kuu ogolaanaysaa inaad magaca playlist ah. Oo markay aad u baahan tahay in ay tirtirto heeso ka playlist ah, inaad u sameeyo mid mid gacanta. Ma jiraa hab sahlan in la sameeyo playlist ku iPhone? Sure, waxaa jira qaar ka mid ah. In socda, waxaana dooneynaa in ay ka hadlaan hab fudud si ay u abuuraan playlist on iPhone, ayaa rajeynaya in ay kaa caawin doonaa inaad kor loogu qaado noloshaada music.
Download TunesGo Wondershare
Wondershare TunesGo waa app desktop waxaana dooneynaa in ay isticmaalaan si ay u sameeyaan playlist on iPhone. Labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) ayaa laga heli karaa. In this article, waxaan qaadi sida si ay u abuuraan playlist on iPhone la Wondershare TunesGo (Mac). Dadka isticmaala Windows, fadlan isku day app Windows ah.
Tallaabada 1. Run Wondershare TunesGo (Mac)
Download, rakibi, oo ay maamulaan Wondershare TunesGo (Mac). Waxaa si fiican u la shaqeysaa iMac, MacBook Pro, iyo MacBook Air kuwaas oo ordaya ee Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Connect aad iPhone la Mac via cable USB in iPhone yimaado la. Wondershare TunesGo (Mac) waxaa lagu ogaan doonaa si toos ah iyo muujiyaan ay info uu furmo suuqa hoose. TunesGo (Mac) taageertaa iPhone 6S (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iyo iPhone 3GS kuwaas oo socda macruufka 9 iyo macruufka 8/7/6/5.
Tallaabada 3. Samee playlists on iPhone
Riix Music dhinaca bidix ee suuqa. Ka dibna waxaad arki kartaa dhammaan noocyada audio file iyo playlists music waa dhinaca midig. Click Add playlist hoose ee midig, markaasuu siin doonaa magac aad jeceshahay. Ka dibna waxaad riixi kartaa nooca file maqal ah: Music, Podcasts, Lugood U, buugaag, ama xataa Voice cadaymaha ay u Muujin files audio on Murayaad bidix. Hubi faylasha aad rabto in lagu daro in playlist aad abuuray oo keliya. Jiid iyo hoos u files kuwaas oo si toos ah u playlist dhinaca midig. Haddii aadan rabin in jiidi oo hoos u heesahaaga playlist ah, waxaad dooran kartaa heeso> xaq guji in ay doortaan "Add to playlist"> in playlist gaar ah.
Fiiro gaar ah: Si ka duwan Wondershare TunesGo (Mac), Wondershare TunesGo (Windows) bandhigayaa playlists on iPhone in wax madax bannaan. Si ka iPhone dhaqaaqo music in playlist ah, waxaad dooran kartaa heeso, xaq guji in ay doortaan "Add to playlist". Raadi aad playlist si ay u dajiyaan.
Ka dib markii la abuurayo playlist ku iPhone, waxaad riixi kartaa playlist si aad u aragto sida oo heeso badan ayaa jira. Haddii aadan jeclaan kasta oo iyaga ka mid ah, aad u masixi karaan. Oo waxay tahay in aad awoodid in midig u guji playlist si aad u magaca. In mustaqbalka, haddii aad rabto in aad ka saarto playlist ka iPhone , aad sidoo kale u samayn karaa.
Daawo Video ah in ay bartaan sida si ay u abuuraan playlist ku iPhone ah
Isku day TunesGo Wondershare in ay nolol ka badan cajiib ah mobile.